मनोनयनमा परेका फिल्मकर्मीको नजरमा कसले चुम्ला कामना फिल्म अवार्ड ? « Kamana
मनोनयनमा परेका फिल्मकर्मीको नजरमा कसले चुम्ला कामना फिल्म अवार्ड ?
लक्स कामना फिल्म अवार्डस् २०७५ को विभिन्न विधाका अवार्ड कसले चुम्लान् ? दर्शक र पाठकले त धेरै अनुमान लगाइसक्नुभयो होला । मनोनयमा परेका कलाकार, निर्माता, निर्देशक तथा प्राविधिक स्वयंचाहिँ के भन्छन्? के छ उनीहरुको अनुमान?
विधा : सर्वोत्कृष्ट फिल्म
कृ नै बेस्ट फिल्म : सुवास गिरी
एज प्रोड्युसर, मैले भन्नुपर्दाचाहिँ कृ नै बेस्ट मुभी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले यो मुभी टेक्निकल्ली निकै राम्रो बनाएका छौं। यसका लागि चाहिने क्यामेरालगायत इक्विपमेन्टहरु पनि मुम्बईबाट ल्याएर काम गरेका छौं। प्राविधिक हिसाबले कृ राम्रो भएकाले यही फिल्म नै बेस्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
शत्रु गतेले पाउनुपर्छ : किरण केसी
फिल्म : शत्रु गते
कुनै पनि फिल्म राम्रो बन्ने निर्देशकको कारण हो, दर्शकले फिल्म हेर्ने कलाकारको राम्रो अभिनयले हो। फिल्मले ५१/१०० दिन मनाउनु नै फिल्म राम्रो भएर हो। शत्रुगतेले सय दिन मनाउँदै नेपालकै सर्वाधिक चल्ने दोस्रो फिल्मको रेर्कड बनाएको छ। त्यस कारण उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड शत्रु गतेले पाउनुपर्छ।
सबै फिल्म डिजर्भिङ : गोविन्द शाही
फिल्म : लिली बिली
नोमिनेसनमा परेका सबै फिल्मलाई बधाई। आफ्नो फिल्म परेपछि आफ्नोले जित्छ भन्ने लाग्छ। लिली बिलीलाई हामीले जुन किसिमको लभ स्टोरी फिल्म बनाउन खोजेका थियौं, त्यसमा न्याय गरेका छौं। यो फिल्म नेपालमा मात्र नभएर अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत विभिन्न देशका दर्शकले निकै मन पराइदिनुभएको छ भने बेलायतमा त यसको ८/९ शो भयो । यसले नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा राम्रो छाप छोड्न सफल भएको छ। यसको कथा, पटकथा, पात्र छनोट आदिलाई सबैले मन पराइदिनुभयो र नेपालमा यसले ५१ दिन मनाउन सफल भयो। लिली बिली र नोमिनेसनमा परेका सबै फिल्म उत्तिकै डिजर्भिङ छन्।
शत्रु गतेले जित्छ कि : निकेश लिम्बु
टु बी अनेस्ट, टप फाइभमा पर्ने जुनसुकै फिल्मले जित्दा पनि हुन्छ। तर फिल्म डिजर्भिङ हुनुपर्यो। ब्लाइन्ड रक्सको कुरा गर्दा यसको भिजन क्रिएट मैले गरेको थिएँ। सृष्टि केसीको वास्तविक कथालाई फिल्ममा उतारिएको छ। दृष्टिविहीनलाई समाजमा गरिने नकारात्मक व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य यो फिल्मको छ। नेपालमा रिलिज भएको ७ महिना भए पनि विदेशमा यो फिल्म अभैm चलिरहेको छ। कामनाजस्तो अवार्डको नोमिनेसनमा पर्नु भनेको मेरा लागि ठूलो उपलब्धि हो। मैले अरु कुनै पनि फिल्म हेर्न पाएको छैन। फिल्म लिली बिली पनि राम्रो छ। शत्रु गतेमा लिजेन्ड कलाकारहरुले अभिनय गर्नुभएको छ, त्यस कारण शत्रु गतेले जित्छ कि।
विधा : सर्वोत्कृष्ट निर्देशक
सबैलाई शुभकामना : दीपाश्री निरौला
फिल्म : छक्का पञ्जा २
अवार्ड भनेको दर्शकको मूल्यांकनको आधारमा हुने हो। दर्शकले त मलाई अवार्ड दिइसक्नुभएको छ। नेपाली फिल्मको इतिहासमै छक्का पञ्जा सिरिजले छलाङ मारेको छ। दर्शक यसै फिल्म हेर्न जाँदैनन्। नोमिनेसनमा पर्ने सबैलाई शुभकामना । जुरीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेर कलम चलाइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।
जसले पाए पनि खुसी : मिलन चाम्स
हा..हा..हा… टप फाइभमा पर्ने सबैजना अवार्डको भागिदार हो। तर अवार्ड कसले पाउँछ भन्ने गेस गर्दाचाहिँ मिलन चाम्स नै भन्नुपर्छ। किनभने फिल्म लिली बिली सारा नेपालीले गर्व गर्ने फिल्म बनेको छ। जुन फिल्म जो कसैले बनाउने आँट गर्न सक्दैन। यो विदेशमा अथोरिटी लिएर सुटिङ गरेको फिल्म हो भने यसका लागि मेहनत र समय पनि उत्तिकै लागेको छ। दर्शकले पनि धेरै मन पराएको फिल्म हो। तर सबै जना अवार्डको उत्तिकै भागिदार भएकाले अवार्ड आफूले नपाए पनि दुःखीचाहिँ हुन्नँ।
अवार्ड पाए जिम्मेवारी थपिन्छ : नवल नेपाल
फिल्म : मंगलम
फिल्म निर्देशनमा सबैको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ र आआफ्नो निर्देशन गर्ने तरिका हुन्छ। उत्कृष्ट पाँचमा परेका सबै फिल्म राम्रा छन्। यसबाट मैले अवार्ड पाउँछु भन्नु एक किसिमको अहं या अहंकार हो। त्यस कारण जुन फिल्मको निर्देशकले अवार्ड जिते पनि एउटा नेपाली फिल्मको निर्देशकले अवार्ड जित्छ। यसमा सबै जना खुसी हुनुपर्छ। यदि मैले अवार्ड जितें भने ममाथि अझै जिम्मेवारी थपिन्छ। म पटकथा र संवादमा पनि छु। फिल्मको पटकथा चुस्त भयो भने फिल्म राम्रो बन्छ। दर्शक बनेर फिल्म हेर्दा सबै फिल्मको पटकथा राम्रो देखें। संवाद भनेको पटकथाले सिर्जना गर्ने कुरा हो। राम्रो पटकथा भयो, यहीभित्र संवाद हुन्छ त्यस कारण म संवादलाई उच्चस्थानमा राख्दिनँ।
जुरीमा भर पर्छ : सुरेन्द्र पौडेल
जुरीलाई के लाग्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। खासमा सबैको काम राम्रो छ। सबै फिल्मको कुनै न कुनै पार्ट राम्रो हुन्छ। त्यही भएर नोमिनेसनमा परेको हो। मेरा लागि सबै फिल्म र सबैको काम बेस्ट हो। सम्पादनमा मसँगैका र मभन्दा भाइहरु पनि नोमिनेसनमा परेका छन्। सबैलाई बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु। अवार्ड त जुरीको निर्णयमा भर पर्छ।
आफैले जित्ने मन हुन्छ : प्रदीप भट्टराई
यो विधामा सबैजना राम्रा परेका छन्। वर्षभरिको त्यति धेरै फिल्मबाट टप फाइभमा आउने सबैको एक किसिमको जित भइसकेको छ। बाँकीचाहिँ जुरीको निर्णय र दर्शकको भोटिङमा भर पर्छ। म यही फिल्मबाट डाइलग र स्क्रिन प्ले क्याटोगरीमा पनि नोमिनेसनमा परेको छु। रमाइलो डाइलगचाहिँ छक्का पञ्जा २ को छ। छक्का पञ्जा २ डाइलग वोरेन्टेड फिल्मकैरुपमा चिनिएको छ। त्यसैले डाइलगचाहिँ छक्का पञ्जा २ ले जित्नुपर्ने हो। सबैलाई अवार्ड आपैmले जित्ने मन हुन्छ। तर मन भएर जितिँदैन।
जसले पाए पनि ठीक छ : झरना थापा
फिल्म : ए मेरो हजुर २
अवार्ड भन्ने कुरा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र हौसला दिनका लागि दिइने हो। त्यस कारण अवार्डप्रति म पोजेटिभ छु। अवार्ड मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन या फलानोेले पाउनुपर्छ भन्ने छैन। अवार्ड हामी ५ जनामध्ये जसले पाए पनि ठीक छ।
मैले जित्छु नि : नवराज बुढाथोकी
फिल्म : भुइँमान्छे
अवार्ड कसले जित्छ, मैले भन्नु पर्दा त मैले नै जित्छु नि। नोमिनेसनमा पर्ने सबैको काम राम्रो छ। तर मैले चाहिँ डिरेक्टरको पोइन्ट अफ भ्युबाट राम्रो काम गरेको छु कि भन्ने लाग्छ। यो मेरो विचार भएकाले मैले अवार्ड पाउँछु भन्ने दाबी गर्न त पाइयो नि। टप फाइभमा आउनु नै जितेसरह भएकाले अवार्ड जसले पाए पनि गुनासो भने हुनेछैन। म यो फिल्मबाट कथा, पटकथा र संवादको नोमिनेसनमा पनि परेको छु। यसको कथा फरक खालको छ। फरक तरिकाले बाँचिरहेको एक पात्रको कथालाई फरक तरिकाले फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको छ। पटकथा विधामा पनि राम्रा राम्रा व्यक्ति आउनुभएको छ। तर भुइँमान्छेको पनि कमचाहिँ छैन। संवादको नोमिनेसनमा भेट्रान भेट्रान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरु पहिलेदेखि काम गरिरहनुभएको छ। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा उहाँहरुको लामो समदेखिको योगदान छ। मेरो विचारमा यो विधाको अवार्डचाहिँ हरिवंश आचार्यको टिमले जित्नुहुन्छ।
घामपानी निर्देशकले पाउने
छर्लङ छ : दीपेन्द्र लामा
फिल्म : घामपानी
सबै जनालाई आफ्नो काम राम्रो लाग्छ। कामको मूल्यांकन गर्ने भनेको जुरीले हो। लजिकल्ली भन्नुपर्दा नवनिर्देशकको मनोनयनमा परेका व्यक्तिमध्ये मैले निर्देशन गरेको घामपानी मात्र उत्कृष्ट फिल्मको मनोनयनमा छ। मेरो काम राम्रो भएको कारण नै घामपानी उत्कृष्ट फिल्म र म नवनिर्देशकको विधामा परेको होला। अन्य नवनिर्देशकको फिल्म उत्कृष्ट फिल्ममा नपरेकाले अवार्ड घामपानी निर्देशकले नै पाउँछ भन्ने कुरा छर्लङ छ। संसारभरिकै अवार्डमा यस्तै भइरहेको छ । यदि बेस्ट फिल्ममा परेको फिल्मको नवनिर्देशकले अवार्ड पाएन भनेचाहिँ अवार्डका बारेमा बुझेका मानिसहरुले प्रश्न उठाउन सक्छन्। मेरो विचारमा बेस्ट स्टोरीको अवार्डचाहिँ भुइँमान्छेले जित्छ। भुइँमान्छे रसियन कथाबाट प्रेरित भएको हो। त्यस कारण सबै फिल्मभन्दा राम्रो छ।
मेरो भोट संरक्षणलाई नै : पूर्णेन्दु झा
फिल्म : संरक्षण
मेरो विचारमा अवार्ड मैले नै जित्छु हा…हा..हा…। फिल्म हेर्दा फिल्म कस्तो सिचुएसनमा बनेको छ, कस्तो कन्सेप्ट छानेको छ, आदि कुरालाई विचार गरेर जज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो फिल्म संरक्षण नै पोलिटिकल सिचुएसनलाई लिएर बनाएको छु। एउटा डेब्यु डिरेक्टरका लागि एक किसिमको चुनौती हो। तर त्यो नहेरीकन मैले यस्तो साहसिक प्रोजेक्टमा काम गरेको छु। यस कारण मेरो भोटचाहिँ संरक्षणलाई जान्छ ।
भुइँमान्छेले जित्ला कि? : आर राजवंशी
फिल्म : शेरबहादुर
मैले सबै फिल्म हेरेको छैन। तर सुनेअनुसार भुइँमान्छे राम्रो बनेको छ। यस कारण अवार्ड भुइँमान्छेको डाइरेक्टरले जित्नुहुन्छ कि? मेरो फिल्ममा अभिनयलगायत सबै पक्ष राम्रो छ । तर मैले आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि दर्शक र जुरीले मूल्यांकन गर्नेछन्।
अभिनय सिक्दै छु, पटकथा र
संवाद हाम्रो अब्बल : दीपकराज गिरी
फिल्म : छक्का पञ्जा २ (अभिनेता)
छक्का पञ्जा २ (संवाद), शत्रु गते (पटकथा)
सर्वकालीन हिसाबले भन्दा सौगात, दयाहाङजीलाई सबैभन्दा अगाडि राख्न सकिन्छ। तर यो सालको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा पुष्पल खड्काले जित्छन् जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, म त अभिनय सिक्ने क्रममा छु जस्तो लाग्छ। संवादमा हाम्रो समूहको मेहनत सधैं अब्बल देखिएको छ, पटकथामा मैले शत्रु गते र छक्का पञ्जा नै देखेको छु, दाबेदार।
सौगातले राम्रो काम गरेको छ : दयाहाङ राई
मैले सबै फिल्म हेरेको छैन। त्यस कारण भन्न सक्दिनँ। तर मेरो विचारमा सौगातले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ, उसले जित्नुपर्ने हो। मेरो आफ्नो बारेमा त मैले के भन्ने आफूले राम्रो काम गर्ने हो ।
सबैको फिल्म हेरेको छैन : सौगात मल्ल
फिल्म : झ्यानाकुटी
नोमिनेसनमा पर्ने सबैको फिल्म हेर्न पाएको भए अवार्ड कसले जित्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। तर कस्तो काम गरेको छ भन्ने थाहा नै नभई ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन।
सबैलाई बेस्ट अफ लक : अनमोल केसी
सबैजनाले आफ्नो बेस्ट दिएको हुन्छ। अवार्ड जो डिर्जभिङ छ, उहाँले नै जित्नुहुन्छ। नोमिनेसनमा परेका सबैजना डिर्जभिङ हुनुहुन्छ। म आफै नोमिनेसनमा भएपछि मैले नै जितूँ भन्ने त हुन्छ नै। तर अवार्ड मैले नै पाउनुपर्छ भन्दा पनि पब्लिकले कसलाई भोट गर्छ, जुरीले कसलाई छान्नुहुन्छ, उसैले पाउने हो। अवार्डका लागि को डिर्जभिङ हुनुहुन्छ भन्ने पोजिसनमा म पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। मैले आफ्नो तर्फबाट राम्रो फिल्म गर्ने र अडियन्सको मन जित्ने हो जहिले पनि। नोमिनेसनमा हुने सबै जनालाई बेस्ट अफ लक।
मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएको छु : प्रदीप खड्का
नोमिनेसनमा परेको सबै फिल्म मैले हेरेको छैन। फिल्म हेरेको भए सुझाव दिन सक्थें। मैले आफ्ना तर्फबाट हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएको छु। अडियन्स र जुरीले मेहनत कत्तिको देख्नुहुन्छ हेरौं। नोमिनेसनमा पर्नु एक किसिमको जित पनि हो। नोमिनेसनमा पर्ने सबैलाई गुड विसेस।
जसले जिते पनि बधाई : पुष्प खड्का
नोमिनेसनमा पर्ने सबै जनालाई शुभकामना ! नोमिनेसनमा पर्नुभएका सबैको फिल्म नहेरेको कारणले गर्दा जज गर्न गाह्रो भयो। अवार्ड जसले जिते पनि बधाई ।
अवार्डको आशा छ : बेनिषा हमाल
सबै जना इक्वेल्ली डिर्जर्भिङ हुनुहुन्छ। यही भएर त टप सिक्समा पर्नुभएको हो। म सुटिङमा बिजी भएकाले शत्रु गतेबाहेक अरु फिल्म हेर्न पाएको छैन। शत्रु गतेमा प्रियंकाको काम राम्रो लागेको छ। अरु फिल्म नहेरेका कारण दर्शक र जुरीको निणर्यलाई नै पर्खनुपर्छ। यसमा आफू पनि परेको कारण अवार्ड पाइन्छ कि भन्ने होप भने छ। किनभने मैले ब्लाइन्ड रक्समा सृष्टिको क्यारेक्टरलाई आफ्ना तर्फबाट न्याय दिने प्रयास गरेको छु। फिल्म रिलिज नहुुन्जेलसम्म मलाई पब्लिकको रेस्पोन्स कस्तो आउला भन्ने डर थियो तर प्रिमियरपछि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु। त्यसैले अवार्डको आशाचाहिँ छ।
मलाई पनि आशा छ : नीता ढुंगाना
फिल्म : पञ्चायत
अवार्ड कसले पाउँछ भन्ने कुरा त भन्नै सकिँदैन नि। मैले कुनै पनि फिल्म हेरेको छैन। सबै जनाको काम राम्रो भएरै नोमिनेसनमा परेको हो। त्यसकारण मैले मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। फिल्म पञ्चायतले इन्टरनेसनल अवार्ड र अन्य दुई अवार्ड पनि पाइसकेको र आफूले राम्रो काम गरेका कारण अवार्ड पाउँछु कि भन्ने आशाचाहिँ छ।
टपमा पर्नु नै जित : शिल्पा पोखरेल
अवार्ड कसले पाउँछ हमीले भन्ने भए त जुरीहरु नै चाहिँदैनथ्यो नि हा..हा..हा…। सबै जनाको काम राम्रो छ। यस कारण यसैले पाउँछ भन्नै सकिँदैन। वर्षमा यति धेरै फिल्म बनिरहेका हुन्छन्, धेरै नायिकाहरु आइरहेका छन्, तीमध्येबाट टप सिक्समा पर्नुभनेको नै जित हो।
बेनिषाले जित्नुहुन्छ कि? : सारा सिरपाली
फिल्म : पिँजडा ब्याक अगेन (अभिनेत्री) र रुद्र (नवअभिनेत्री।
आफ्नै नाम त भन्न मिल्दैन होला हा…हा..हा..। नोमिनेसनमा पर्दा खुसी लागेको छ। नोमिनेसनमा पर्ने सबै जनाको फिल्म त हेरेको छैन तर ब्लाइन्ड रक्समा बेनिषा हमालले राम्रो काम गर्नुभएको छ। यस कारण बेस्ट एक्ट्रेसको अवार्ड उहाँले जित्नुहुन्छ कि। म रुद्रबाट नवअभिनेत्रीको नोमिनेसनमा पनि छु। रुद्र मेरो डेब्यु मुभी भए पनि एक्सन मुभी भएकाले आफूलाई राम्रोसँग एक्सप्लोर गर्न पाएको थिइनँ। तर जति आफ्नो पार्ट छ त्यसमा मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिएको छु। डेब्यु फिल्ममा सबैको काम राम्रो छ कसले अवार्ड जित्छ भन्ने कुराचाहिँ भन्नै सकिँदैन।
मेरो काम चित्त बुझ्दैन : मेनुका प्रधान
मैले सबै फिल्म हेर्न पाइनँ। तर पञ्चायत फिल्ममा नीता ढुंगानाले गरेको भूमिका एकदमै च्यालेन्जिङ छ। त्यस कारणले अवार्ड उनले जित्छिन् होला। अहिलेको मोर्डन टाइममा पुरानो स्टोरीअनुसार आफूलाई प्रिजेन्ट गर्नु पक्कै पनि सजिलो कुरा होइन। मेरो काम त मलाई कहिल्यै पनि चित्त बुझ्दैन।
आशिरमानले जित्छन् कि ? : स्वरुपपुरुष ढकाल
फिल्म : छक्कापञ्जा २
अवार्ड कसले जित्छ निकै गाह्रो प्रश्न हो। मेरो विचारमा पपुलारिटीको हिसाबमा अवार्ड आसिरमान देशराजले जित्छन्। किनभने सोसल मिडियाहरुमा पनि उनी पपुलर छन्। त्यस्तै अवार्ड जित्ने सम्भावना भनेको सारुक ताम्राकारको पनि छ। रानीमा उनको एक्टिङ राम्रो छ। हामीले सँगै मुम्बईमा एक्टिङ सिकेका हौं। उसमा अभिनय गर्ने राम्रो क्षमता छ। छक्कापञ्जामा मेरो भूमिका मल्टिपल थियो। मेरो रोल नै बढी नभएकोले मलाई अवार्ड जित्छु जस्तो लाग्दैन।
थाहा भएन : आशिरमान देशराज श्रेष्ठ जोशी
फिल्म : ग्याङस्टर ब्लुज
अवार्ड कसले जित्छ मलाई त थाहा भएन। मलाई यसबारे आइडिया नै भएन।
मेरो काम राम्रो छैन : सुरज पाण्डे
फिल्म : लभ लभ लभ
छक्कापञ्जा २ मा स्वरुपपुरुष ढकालको काम राम्रो छ नि। त्यसैले अवार्ड उहाँले जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो काम त मलाई राम्रो लागेको छैन। अब अर्को फिल्ममा चाहिँ राम्रो हुन्छ।
आइडिया छैन : सारुक ताम्राकार
फिल्म : रानी
मलाई अवार्ड कसले जित्छ आइडिया छैन। मेरो काम भनेको आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने हो। अवार्ड भनेको अडियन्स र जुरीको कुरा हो। यो मेरो हातमा छैन। जसले पाए पनि फेयर जजमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ।
सबैले मेहनत गरेका छन् : जसिता गुरुङ
अनेस्टली भन्नुपर्दा सबैजना अवार्डका लागि डिजर्भिङ हुनुहुन्छ। सबैको फस्र्ट मुभी भएकाले सबै जनाले राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ। मैले सबै फिल्म हेरेको छैन। कृ र ऐश्वर्या हेरेको थिएँ। दुवैको काम राम्रो थियो। फिल्म भनेको अडियन्सका लागि बनाउने हो। अडियन्सले कसको काम मन पराउनुहुन्छ उहाँले नै जित्नुहुन्छ। पर्सनल्ली नाम नै त कसरी भन्नु? जसले अवार्ड जिते पनि राम्रो नै हुन्छ।
अडियन्सलाई छोडौं : दीपिका प्रसाईं
फिल्म : ऐश्वर्य
हा..हा..हा.., कस्तो डिफिकल्ट क्वेस्चन? डेब्यु फिल्ममा अवश्य पनि सबै जनाले राम्रो मेहनत गरेको हुन्छ। दर्शकले कुन फिल्मलाई माया गर्नहुन्छ, त्यही फिल्मबाट बेस्ट एक्ट्रसले अवार्ड पाउँछ। सबै जनाले आफूले अवार्ड जितोस् भन्ने त लागिहाल्छ। मलाई पनि लागेको छ। बाँकी अडियन्सलाई छोडौं।
विधा : सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेता
मलाई दिँदैनन् : शिवहरि पौडेल
सहअभिनेतामा मसँग सबै राम्रा राम्रा कलाकार परेको कारण अवार्ड कसले जित्छ भन्न गाह्रो छ। म नोमिनेसनमा पहिले पहिले पनि परिरहेको छु तर मलाई अहिलेसम्म अवार्ड दिएका छैनन् र दिँदैनन् पनि। मैले चाहिँ अवार्ड जित्दिनँ नै तर कसले जित्छ थाहा छैन।
सबैलाई अल द बेस्ट : सलोन बस्नेत
मैले भन्दा त अभियस्ली अवार्ड आफैले नै जितूँ भन्छु नि। तर सबै जना राम्रो राम्रो एक्टर हुनुहुन्छ। अहिले सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु।
कि म कि शिवहरि दाइ : जितु नेपाल
सहअभिनेताको मनोनयनमा पर्ने सबै जना अवार्डको दाबेदार हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि अवार्डचाहिँ शिवहरि दाइ र ममा एक जनाले पाउँछौं जस्तो लाग्छ। शत्रु गतेमा शिवहरि दाइको अभिनय एकदमै राम्रो छ। मेरो दाइ पनि हुनुभएको कारणले मचाहिँ उहाँलाई नै सपोर्ट गर्छु। छक्कापञ्जा २ बाटै उत्कृष्ट संवादमा परेको कारण संवादको अवार्डचाहिँ हामीले नै पाउँछौं जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो फिल्मको विशेषता नै डाइलग हो।
कि शिवहरि दाइ कि सलोन : रवीन्द्र झा
पहिलो कुरा त अवार्डभन्दा पनि मलाई दर्शकको साथ चाहिन्छ। म न राम्रो छु न त मेरो हाइट नै छ। तर पनि मलाई दर्शकले मन पराइदिनुभएको छ। यही नै मेरा लागि अवार्डसरह हो। मानिसले भगवान् देख्न सक्दैनन् भनिन्छ तर मैले मेरो भगवान् देखिरहेको छु, ती दर्शक हुन्। मेरो काम हेरेर मलाई गुरुहरुले नोमिनेसनमा राखिदिनुभएको छ। म उहाँहरुलाई प्रणाम गर्छु। मानिसले राम्रो काम गरेपछि त्यसको पुरस्कार खोज्छ। त्यस कारण उनीहरुको हौसला बढाउन अवार्ड जरुरी छ। मेरो विचारमा सहअभिनेताको अवार्ड शिवहरि पौडेल वा सलोन बस्नेतले जित्नुहुन्छ। किनभने उहाँहरुको काम राम्रो छ।
जुरीलाई नै छोडौं : प्रमोद अग्रहरी
अवार्ड कसले पाउँछ भन्ने निर्णय त जुरीले गर्नुहुन्छ। सम्माननीय जुरीले कसले कस्तो काम गरेको छ भनेर अभियस्ली हेर्नुहुन्छ। अवार्ड कसले पाउँछ भन्न त गाह्रो छ। जितु नेपाल, सलोन बस्नेतजस्ता एक सय एक कलाकारहरु नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ। यो काम जुरीलाई नै छोडौं।
विधा : सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेत्री
सबैको काम राम्रो छ : मिथिला शर्मा
फिल्म : आधा लभ
नोमिनेसनमा आउनु नै काम राम्रो गरेको छ भन्नु हो। यसरी काउन्टमा आउनु नै ठूलो कुरा हो। नोमिनेसनमा परेर अवार्ड जित्नका लागि धेरै राम्रो काम गर्नुपर्छ, सबैको काम राम्रो छ। सबैजना उत्तिकै क्षमतावान् हुनुहुन्छ। मनोनयनमा पर्ने सबै जनालाई शुभकामना!
मिथिलाले जित्नुुहुन्छ : रोजिषा शाही
बेस्ट सर्पोटिङ एक्ट्रेसको अवार्ड मिथिला शर्माले जित्नुहुन्छ। उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। सि इज एन गुड एक्ट्रेस। आफ्नो कुरा गर्दाखेरी म आफ्नो कामदेखि कहिल्यै ह्याप्पी हुन्नँ। म आफ्नो कामलाई जहिल्यै क्रिटिकल्ली हेर्छु, मैले अझ धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्नेछ।
आफ्नै नाम लिँदा प्राउडी लाग्ला : अनु शाह
फिल्म : कान्छी
म आफैले अवार्ड जित्छुभन्दा प्राउडी लाग्ला। तर अवार्ड आफूले नै जितूँ भन्ने त लागिहाल्छ नि। धेरै फिल्मबाट छानिएर टप फाइभमा आउँदा आफूलाई लक्की ठान्छु। आफूले राम्रो काम गर्ने हो अवार्ड कसलाई दिने भन्ने कुरा जुरीको हो। नोमिनेसनमा पर्ने सबै जना मलाई मन पर्ने एक्ट्रेस हुनुहुन्छ। अवार्डचाहिँ कसले जित्छ भन्नै सक्दिनँ।
जित्न पाए हुन्थ्यो : वर्षा राउत
अवार्ड कसले जित्छ भन्न मिल्दैन। नोमिनेसनमा पर्ने सबैको फिल्म मैले हेरेको छु। सबैको काम राम्रो छ। अवार्ड डिर्जभिङले जित्नु पर्यो। कामको आधारमा अवार्ड जित्दा फेयर हुन्छ। नोमिनेसनमा परेपछि अवार्ड जित्न पाए हुन्थ्यो जस्तो त सबैलाई लागिहाल्छ। म लक्स स्टार अफ द इयरमा पनि परेको रहेछु। यसमा पर्नुहुने सबै जनालाई पब्लिकले निकै मन पराइरहनुभएको छ। उहाँहरुको सबै फिल्म चलिरहेको छ। यसमा पब्लिकको भोटको आधारमा विजेता हुने भएकाले जसलाई पब्लिकले भोट गर्नुहुन्छ, उसैले अवार्ड जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
विधा : सर्वोत्कृष्ट खलपात्र
सबैजना अवार्डको दाबेदार : विपिन कार्की
काममा केही नै नभई त पक्कै नोमिनेसनमा पर्नुभएको होइन होला। त्यस कारण सबैजना अवार्डको दाबेदार हुनुहुन्छ। नोमिनेसनमा पर्ने सबै जनाको काम हेर्ने मौका पाइनँ आफ्नो मात्र काम हेरेर पनि भन्ने कुरा भएन। त्यस कारण अवार्ड यसैले जित्छ भन्न सकिँदैन।
जसले पाए पनि खुसी : प्रशान्त ताम्राकार
अवार्ड कसलाई दिने भन्ने कुरा त जुरीले डिसिजन गर्ने कुरा हो। काम गर्दा अवार्ड पाउँछु भनेर गरिँदैन। तर गरेको कामबाट रिकग्निसन गरेर टप फाइभमा राखिदिनु नै राम्रो कुरा हो। जुरीले काम हेरेर नोमिनेसनमा राखिदिँदा खुसी लाग्छ। अवार्ड जसले पाए पनि एउटा नेपाली कलाकारले पाउने भएकाले दुःख मान्नु पर्दैन।
जसले जिते पनि शुभकामना : पुकार भट्टराई
फिल्म : पिँजडा ब्याक अगेन
आआफ्नो ठाउँमा सबैको काम राम्रो छ। अनुप भाइले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ भने प्रशान्त भाइको पनि काम राम्रो देखिन्छ। यसमा मैले नै अवार्ड जित्छुभन्दा अन्त असर पर्ला। जुरीले काम हेरेर विजेता छनोट गर्नुपर्यो। अवार्ड जसले जिते पनि शुभकामना!
सबैको काम राम्रो : रमेशरञ्जन झा
अवार्ड कसले जित्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नै गाह्रो छ। स्वाभाविकरुपमा टप फाइभमा पर्नुहुने सबै जनाको काम राम्रो भएको कारण नै मनोनयनमा पर्नुभएको हो। सयांै फिल्मबाट टप फाइभमा आउनु भनेको एक किसिमले उत्कृष्ट हुनु हो। म कलाकार भएकाले जजको आँखा छैन र जज गर्नका लागि सक्षम पनि छैन। त्यस कारण भन्न सक्दिनँ। आफ्नो कामको कुरा गर्ने हो भने मैले फिल्ममा धेरै मेहनत गरेर राम्रो काम गरेको छु। म मात्र नभएर टिमले नै निकै मेहनत गरेको छ।
केदार शिवहरिको कमेडी राम्रो : जयनन्द लामा
मेरो विचारमा हास्य कलाकारमा केदार घिमिरे र शिवहरि पौडेलमध्ये एक जनाले अवार्ड जित्छन्। म पनि नोमिनेसनमा पर्नु छुट्टै कुरा हो। तर हामीले आफूलाई भन्दा पनि राम्रो काम गर्नेलाई मान्यता दिनुपर्छ। केदार र शिवहरिको कमेडी राम्रो छ। त्यस कारण उनीहरुमध्ये एकले अवार्ड पाउँछन् भन्ने लाग्छ।
केदारले पाउँछ : बुद्धि तामाङ
फिल्म : दुई रुपियाँ
मेरो विचारमा केदार घिमिरेले अवार्ड पाउँछन्। अवार्डको बारेमा मलाई त्यति थाहा पनि छैन। अहिलेसम्म अवार्डको नाममा एउटा किलो पनि पाएको छैन। त्यस कारण मलाई त्यति धेरै थाहा छैन।
राजारामले पाउनुहुन्छ : शिवहरि पौडेल
जुरीले निर्णय गर्ने कुरा हामीले भन्न मिल्दैन। मेरो विचारमा राजाराम पौडेलले अवार्ड जित्नुहुन्छ। किनभने उहाँ सिनियर कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँको एक्टिङ निकै राम्रो छ। यदि म जुरीमा थिएँ भने त राजाराम दाइलाई नै अवार्ड दिन्थें।
कामनाको अवार्डमा विश्वास छ : राजाराम पौडेल
फिल्म : म यस्तो गीत गाउँछु
मलाई अवार्डमा खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। अहिले अवार्डको नाममा पैसा कुम्ल्याउने काम मात्र भइरहेको देख्छु। तर कामनाको अवार्डमा भने मलाई विश्वास छ। यो पुरानो पत्रिका भएकाले यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्य अवार्डहरुमा केदार घिमिरेले जितिरहेका कारण उनले नै अवार्ड जित्छन् कि जस्तो लाग्छ। मलाई आफूले अवार्ड जित्छु जस्तो लाग्दैन र मैले आफूलाई कहिल्यै पनि भोट हालेको छैन र हाल्दिनँ पनि। तर म मेहनतका साथ राम्रो कर्म गर्छु र मेरो कामलाई दर्शकले मन पराइदिनुभएको छ। जुरीले सबैको काम हेरेर सही मूल्यांकन गर्नहुन्छ भन्ने लाग्छ।
म त बोल्दिनँ : केदार घिमिरे
म त यसका बारेमा केही भन्न सक्दिनँ। मैले पोहोर पनि नोमिनेसनमा हुँदा गरेको गेस मिलेन। एउटाले जित्छ भनेको अवार्ड अर्कैले जित्यो। त्यस कारण किन भन्ने जस्तो लाग्यो, म केही बोल्दिनँ।
मैले नै जिते हुन्थ्यो : कुशाग्र भट्टराई
पिँजडा ब्याक अगेन मेरो पहिलो मुभी हो। यसबाट नै कामना फिल्म अवार्डमा नोमिनेसनमा पर्दा खुसी लागेको छ। नोमिनेसनमा परेको सबै फिल्महरु हेरेको जस्तो लाग्छ। तर अन्य बालकलाकारले कस्तो काम गर्नुभएको छ याद भएन। अनुभव रेग्मीको कामचाहिँ राम्रो लागेको थियो। तर सबै जना इक्वेलजस्तो लाग्छ। मेरो फिल्म हेरेर ठूलो ममी र फ्यामिलीहरुले धेरै राम्रो छ भन्नुभएको थियो। सबैले मन पराउनु भएको छ। अवार्ड जसले जिते पनि ठीक छ। अलिअलि चाहिँ मैले नै जिते पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ।
थाहा छैन : सौरभ शाह
मैले अनुभव रेग्मीको फिल्म ए मेरो हजुर २ मात्र हेरेको छु। अरु फिल्म हेरेको छैन। अनुभव रेग्मीको काम मन परेको थियो। कृ मेरो पहिलो फिल्म हो। आफ्नो कामबाट म सन्तुष्ट छु। अवार्ड कसले जित्छ थाहा छैन।
सबै बेस्ट : यम थापा
नोमिनेसनमा पर्ने सबै फिल्मको कथा राम्रो छ। टप फाइभमा परेकामध्ये एक जना बेस्टले अवार्ड जित्ने हो। मेरा लागि सबै जना बेस्ट हो।
जुरीको सम्मान गर्नुपर्छ : प्रदीप भारद्वाज
फिल्म : झ्यानाकुटी (कथा), लिलीबिली (पटकथा)
फिल्म भनेको स्क्रिनप्लेमा बन्ने हो। जुरी टिम र एक जनाको विचार मिल्दैन। त्यस कारण ठ्याक्कै यही फिल्मले जित्छ भन्ने छैन। हामीले भन्दा पनि उहाँहरुको डिसिजन बेटर हुन्छ। पछि एउटा फिल्मले जित्दा अर्को फिल्मले जित्नुपथ्र्यो भन्ने गुनासो हुँदैन। हामीले जुरीको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ। म स्क्रिनप्लेमा पनि परेको छु। झ्यानाकुटीको स्क्रिनप्ले बलियो भएकाले अवार्ड नै लानुपर्ने हो। तर नोमिनेसनमा परेको छैन। बरु लिली बिलीबाट चाहिँ नोमिनेसनमा परेको छ। त्यस कारण हाम्रो र जजको दृष्टिकोण एउटै रहँदैन।
राम्रो भएकैले ओस्कारमा
छानिएको होला : शिवम अधिकारी
फिल्म : पञ्चायत (कथा र संवाद)
पञ्चायतको कथा र संवाद दुवै राम्रो भएकै कारण ओस्कारका लागि छानिएको होला। तर नेपालमा चलिरहेका अवार्डमा सबै फिल्मलाई समावेश गरेर एउटा एउटा अवार्ड दिने चलन छ। ओस्कारमा एउटै फिल्मलाई २२ ओटा अवार्ड दिइन्छ भने नेपालमा किन दिइँदैन? यदि एउटै फिल्मको धेरै पक्ष राम्रा भए पनि अवार्ड भने दिइँदैन सबैको चित्त बुझाउनका लागि अवार्ड भाग लगाइन्छ। मैले फिल्म बनाउन नजानेको हो कि जुरीले हेर्न नजानेको हो थाहा छैन। भुइँमान्छे र मंगलमको पनि राम्रो कथा लागेको छ।
भन्न सक्दिनँ : हरिवंश आचार्य
फिल्म : शत्रु गते (प्रदीप भट्टराईका साथ)
मैले यो अवार्ड नपाए पनि ठीक छ। मैले सबैको फिल्म नहेरेको कारण कसले जित्छ भन्न सक्दिनँ।
अवार्डको दाबेदार छु : अर्जुन पोखरेल
गीत : तिमी रोएको पल/ऐश्वर्य
सबै गीतको आआफ्नै विशेषता छ । क्लासिकल गीतहरु कल्चरल बेसका हुन्छन्। नोमिनेसनमा सबै किसिमका गीत छन्। लोकप्रियता र कम्पोजिसनको हिसाबले तिमी रोएको पलले नै जित्छ भन्ने होेप छ। यही गीतको शब्दबाट पनि नोमिनेसनमा भएको हुँदा शब्दमा पनि होप छ। तिमी रोएको पल गीतले जुन भनाइ व्यक्त गर्छ, यस्तो लाइनिङ पहिले आएको थिएन। शब्द संयोजन हेर्ने हो भने अवार्डको दाबेदार छ। तर यो मेरो पर्सनल विचार हो। बाँकी जुरीकै हातमा छ।
मुडमा भर पर्छ : धीरेन्द्र प्रेमर्षि
गीत : सम्झनाको सारंगी/संरक्षण
गीत भनेको सिर्जनाको कुरा हो। जुन गीतले पनि अवार्ड जित्न सक्छ। कुन गीत कसले कस्तो मुडमा सुनेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। कस्तो मुडमा गीत सुन्दा छुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। मेरो गीत कामना फिल्म अवार्डको नोमिनेसनसम्म पुगेको छ। तर मलाई कृष्णहरि बरालको गीत लेखन शैली मन पर्छ। उहाँका गीत साहित्यसँग आधारित हुन्छन्, म उहाँको प्रशंसक हुँ। म मैथली पृष्ठभूमिको हँु। मैथली भाषालाई गीतको भाषा पनि भनिन्छ। त्यहाँको जीवनशैली संगीतमय हुन्छ। मेरो गीत लेखन पनि मैथली शैलीबाट प्रभावित छ। मेरो गीतहरुको शब्दबाट दृश्य प्रस्ट हुने खालका हुन्छन् एक किसिमको छाप छोड्छन्।
जसले जिते पनि ठीक छ : डा. कृष्णहरि बराल
गीत : ए मेरो हजुर/ए मेरो हजुर २
ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ। वर्षभरिका फिल्ममा समावेश त्यति धेरै गीतबाट टप फाइभमा आउनुभनेको एक किसिमको अवार्ड पाएसरह नै हो। त्यस कारण अवार्ड जसले पाए पनि ठीकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति बेलाका लागि ५ ओटै गीत बराबर हो जसले अवार्ड जिते पनि ठीक छ।
भन्न मिल्दैन : कालिप्रसाद बास्कोटा/सबिन एकतारे
गीत : अजम्बरी/ग्याङस्टर ब्लुज (गीत)
ओडौंला पिरतीको/शत्रु गते (गायन)
सबै गीतको शब्द राम्रो छ। शब्दको आआफ्नै विशेषता छन्। अवार्ड कसले जित्छ भन्न मिल्दैन। म गायनमा पनि रहेछु। मैले कुनै पनि गीतलाई क्रिटिकल्ली हेरेको छैन। सबै गीतलाई एउटै एंगलले हेर्नै मिल्दैन। त्यस कारण बेस्ट प्ले ब्याक मेल सिंगरको अवार्ड जसले पनि जित्न सक्नुहुन्छ। नोमिनेसनमा जो जो हुनुहुन्छ सबैलाई बधाई।
तिमी रोएको पलको सम्भावना छ : मुक्त उदास
गीत : तिमी नि आधा/पिँजडा ब्याक अगेन
कस्तो गाह्रो क्वेस्चन? अवार्ड जसले जिते पनि राम्रो शब्दले जितोस्। नोमिनेसनमा पर्ने सबै गीत राम्रा छन्। यीमध्येबाट तिमी रोएको पल निकै राम्रो र मन पराइएको गीत भएकोले यो गीतको सम्भावना बढी छ।
विधा : सर्वोत्कृष्ट संगीतकार
राम्रोले पाउँछ : वसन्त सापकोटा
मलाई आँखामा : ए मेरो हजुर २
अवार्ड जसले पाए पनि राम्रो मान्छेले पाउँछ। नोमिनेसनमा परेका सबैको काम राम्रो छ। १९÷२० मात्र होला। स्रोताले मन पराएको र चर्चाको हिसाबले रामो मानिएको गीत जसले डिजर्भ गर्छ, उसैले अवार्ड पाउँछ।
जुनले पनि जित्न सक्छ : हरि लम्साल
गीत : उड्यो मन/ब्लाइन्ड रक्स
अवार्ड कुन हिसाबले दिने भन्नेमा भर पर्छ । चर्चाको हिसाबमा अवार्ड दिने हो भने त्यसमा मेरो गीत पर्दैन होला। तर काम र एउटा कम्पोजरको हिसाबले हेर्ने हो भने यो गीतको सम्भावना छ। नोमिनेसनमा पर्ने सबै गीत उत्तिकै कर्णप्रिय छन्। म जुरी भएको भए यही गीतले जित्छ भन्थें। अवार्ड जुनले पनि जित्न सक्छ।
सबै एक सय एक छन् : राजनराज शिवाकोटी
गीत : कुटुमा कुटु/दुई रुपियाँ
अवार्ड कसले जित्छ भन्ने कुरा गेस नै गर्न चाहन्नँ। सबैको एक सय एक गीत छन्। जुरीले जसलाई अवार्ड दिए पनि नेपाली गीतसंगीतकै सम्मान हुने हो, त्यसमा म खुसी नै हुन्छु।
आफैले जिते हुने : दीपक शर्मा
गीत : पर्ख पर्ख:मंगलम
मेरो भित्री चाहनाचाहिँ अवार्ड नै जितौं भन्ने छ। टप फाइभमा भएपछि अवार्डको २० प्रतिशत हिस्सा त म पनि हो। अवार्ड जित्ने मेरो पनि अधिकार भएकाले भित्री मनले आफैले अवार्ड जिते हुने जस्तो लाग्छ। तर बाहिर भन्नु पर्दा अन्य ४ जनाको गीत पनि मेरो भन्दा कमजोर छैन। सबै एक सय एक छन्।
विधा :सर्वोत्कृष्ट पाश्र्वगायक
दोस्रो पटक मनोनयनमा पर्दा निकै भाग्यमानी ठानेको छु : कृष्ण काफ्ले
सुगम पोखरेलको दुईओटा गीत नोमिनेसनमा परेका रहेछन्। उहाँको भन्छु आज बोलको गीत पनि निकै चर्चा कमाएको गीत हो। त्यस्तै कालिप्रसाद बास्कोटाको पिरतीको बर्को तिमीलाई पनि हिट गीत हो। सबै गीत हिट नै छन्। मंगलमको पर्ख पर्ख मायालु पनि निकै मन पराइएको गीत हो। सबै गीत राम्रा भएकाले जुन गीतले अवार्ड पाए पनि अन्याय हुदैन। दोस्रो पटक पनि कामना फिल्म अवार्डका मनोनयनमा पर्दा निकै भाग्यमानी ठानेको छु।
विधा :सर्वोत्कृष्ट पाश्र्वगायिका
सबैको सम्भावना उत्तिकै :अञ्जु पन्त
गीत: भन्छु आज/म यस्तो गीत गाउँछु
अवार्ड कसले पाउँछ त थाहा छैन तर खुसी लाग्दो कुरा म मेरा बहिनीहरुसँगै नोमिनेसनमा छु। कतिपय अवस्थामा म आफूलाई आएको गीतहरु पनि बहिनीहरुलाई गाउन दिन्छु। धेरै पटक आफूलाई आएको गीत बहिनीहरुले पनि गाउनुपर्छ भनेर दिएको छु। सबैको गीत एक सय एक छन्। भन्छु आज बोलको गीत पनि मेलोडीको हिसाबले कुरा गर्दा मिठो सरल र सबैले बुझ्ने छ। यस कारण सबै गीतको सम्भावना उत्तिकै छ।
सबैको गीत राम्रो छ :बानिका प्रधान
नोमिनेसनमा पर्ने सबैजना अवार्डको दाबेदार हुनुहुन्छ। मलाई उहाँहरु सबैको गायकी मन पर्छ। सबैको गीत राम्रो भएकोले जसले पनि जित्न सक्नुहुन्छ।
यसैले जित्नुपर्छ भन्ने छैन : विन्दु परियार
गीत : पर्ख पर्ख/मंगलम
सबैको गीत चलेका र राम्रा छन्। त्यस कारण अवार्ड जसले जित्दा पनि ठीक छ। नोमिनेसनमा परेकोमा खुसी लाग्यो। अवार्ड यसैले जित्नुपर्छ भन्ने छैन।
दर्शकको हातमा छ : मेलिना राई
गीत : कुटुमा कुटु /दुई रुपियाँ
सबै गीत राम्रो भएकाले अवार्ड कसले जित्छ भन्नै सकिन्न। सबै जना सिनिएर दिदीहरु नोमिनेसनमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण दर्शकले कुन कसले जिताउने दर्शकको हातमा छ।
अवार्डको आशा छ : मीना निरौला
गीत : रुपै मोहनी/शत्रु गते
अञ्जु दिदीको गीत धेरै राम्रो छ। पर्ख पर्ख मायालु र कुटुमा कुटु पनि निकै रामो गीत छ। कुटुमा कुटुमा जति नभए पनि रुपै मोहनी चर्चाको हिसाबले एउटा लेभलमा आएको गीत हो। आफू नोमिनेसनमा भएको कारणले अवार्ड जित्छु कि भन्ने आशा त हुन्छ नै। यो गीत तथा यसको शब्दले इन्डिया र नेपालमा अवार्ड पाइसकेको पनि छ। बाँकी जुरीको हातमा छ।
विधा : सर्वोत्कृष्ट नृत्य निर्देशक
अवार्ड त मैले जित्छु होला : कविराज गहतराज
आँखैमा/ए मेरो हजुर २, इन्जिन गाडीमा/लिली बिली, कुटुमा कुटु/दुई रुपियाँ, पर्ख पर्ख/मंगलम
४/४ वटा फिल्मबाट नोमिनेसनमा परेपछि अवश्य पनि अवार्ड त मैले नै जित्छु होला। ४ वटा गीतमध्ये कुटुमा कुटु गीतबाट अवार्ड जित्छु होला। किनभने यसभन्दा अघिको अधिकांश अवार्ड समारोहमा यही गीतबाट जितिरहेको छु र यो गीतलाई धेरैले मन पराउनुभएको छ।
विधा : सर्वोत्कृष्ट द्वन्द्व निर्देशक
ह्याट्रिक गर्ने रहर छ : हिमाल केसी
फिल्म : संरक्षण र पिँजडा ब्याक अगेन
सबैको काम आआफ्नो क्षेत्रमा राम्रो छ। निर्णायकले पनि आआफ्नो हिसाबले निणर्य गर्नुुहुनेछ। उहाँहरुले एक्सन फिल्म छ भनेर एक्सन फिल्मलाई अवार्ड दिने कि जस्तो फिल्म भए पनि त्यसमा नयाँ के गर्न खोजेको छ, एक्सनमा के विशेषता छ भनेर हेर्नुहुन्छ। मैले यसपटक पनि आफूले गरेका फिल्मको एक्सनमा नौलो र एक्स्ट्रा काम गर्न खोजेको छु। आफूले पृथक् काम गर्न खाजेको हेरेर जुरीले सही मूल्यांकन गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। दुईपटक कामना फिल्म अवार्ड जितें। यसपालि ह्याट्रिक गर्ने रहर छ। नोमिनेसनमा पर्ने कसैसँग पनि मैले कम्पिटिसनको रुपमा लिएको छैन। मैले आफूसँगै कम्पिटिसन गरिरहेको छु।
सबैलाई शुभकामना : रोशन श्रेष्ठ
अवार्ड जसले जिते पनि राम्रो काम गर्नेले उसको क्षमताअनुसार जित्छ। आआफ्नो काम सबैलाई राम्रो लाग्छ जसले जिते पनि हामी सबै दाजुभाइ नै हौ। सबैलाई शुभकामना!
टुंगो छैन : सम्राट बस्नेत
अवार्ड कसले पाउँछ, टुंगो छैन। फाइट पनि कुन हिसाबले जज गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ।
यसपालि आस छ : चन्द्र पन्त
अरु वर्षहरुमा भए म आफूले अवार्ड जित्छु भन्दैनथें। तर यो वर्षचाहिँ अवार्ड मैले नै पाउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। किनभने कृ गत वर्षकै बेस्ट एक्सन मुभी हो। अनमोल केसीले कृमा गरेको एक्सन नेपालमै पहिलो पटक हो। अर्को कुरा यस वर्ष भएका सबै अवार्डमा मैले नै जितिरहेको हुँदा आशा बढी छ।
विधा : सर्वोत्कृष्ट छायांकन
अरुको फिल्म हेरेको छैन : सञ्जय लामा
फिल्म : ए मेरो हजुर २ र म यस्तो गीत गाउँछु
नोमिनेसनमा पर्ने सबै जना राम्रो सिनेम्याटोग्राफरहरु हुनुहुन्छ। त्यहीबाट जुरीले राम्रो काम गर्ने नम्बर १ छान्ने हो। यदि नोमिनेसनमा पर्ने अरुले राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ भने अरु कसैले अवार्ड जित्नुहुन्छ, नत्र मैले जित्छु। सबै जनाले आफ्नो काम राम्रो गर्न खोजेको हुन्छ। मेरो काम कस्तो छ मैले भन्दा पनि अरुले भन्नुपर्यो। मैले सबै फिल्म हेरेको छैन। त्यस कारण कसले जित्छचाहिँ थाहा भएन।
नलेज भएन : दीर्घ गुरुङ
अवार्ड कसले जित्छ मलाई नलेज भएन। पहिले मैले २ पटक नेसनल अवार्ड पाएको थिएँ। तर पछिल्लो समय नोमिनेसनमा परे पनि अवार्ड भने जितेको छैन। पहिले एनालग प्रविधिमा काम गर्दा १६ एमएममा शुट भएको फिल्ममा सिनेमाटोग्राफरको काम देखिन्थ्यो। तर अहिले डिजिटल प्रविधिको जमानामा सबै काम सिनेमाटोग्राफरकै हुन्छ भन्ने हुँदैन।
जुरीको हातमा छ : पुरुषोत्तम प्रधान
अवार्ड जुरीको हातमा छ। जुरीले जसलाई दिन्छन्, उसले पाउँछ।
जसले जिते पनि खुसी हुनेछः सुदीप बराल
नोमिनेसनमा पर्ने सबैको काम राम्रो छ। नोमिनेसनमा पर्नु नै विजेता बन्नु हो। जुरीको नजरमा जो डिर्जभिङ छ, उसैले अवार्ड पाउँछ। मैले नै जित्नुपर्छ पनि भन्दिनँ। जसले जित्नु भए पनि खुसी हुनेछु।
म त भन्न सक्दिनँ : अर्जुन जिसी
अवार्ड कसले जित्छ त म भन्न सक्दिनँ, यसमा मभन्दा सिनिएर दाइहरु पनि हुनुहुन्छ भने भाइहरु पनि हुनुहुन्छ। सबैको काम राम्रो छ त्यसमा पनि जुरीहरुले कसरी निर्णय गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। फिल्म चलेको आधारमा वा काम राम्रो भएको आधारमा अवार्डको घोषणा गर्नु फरक कुरा हो। नचलेको फिल्मको पनि प्राविधिक पक्ष राम्रो हुन सक्छ, त्यसमा व्यापारले फरक पर्दैन ।
यो त गाह्रो कुरा हो : बनिष शाह
फिल्म : ए मेरो हजुर २ (मिलन श्रेष्ठका साथ) र कान्छी (भूपेन्द्र अधिकारीका साथ)
अवार्ड कसले जित्छ भन्नु गाह्रो कुरा हो। फिल्म हेर्दाखरी एउटाको नाम त लिन सकिँदैन । मेरो विचारमा छक्कापञ्जा २, लिली बिली र कान्छीमध्ये एक फिल्मले जित्छ।
विनर डिपेन्ड्स अन जुरीः विपिन मल्ल
विनरको डिसिजन गर्ने काम जुरीको हो। सबैको काम राम्रो छ। विनर डिपेन्ड्स अन जुरी।
बोल्न मन लाग्दैन : शैलेश श्रेष्ठ
फिल्म : ए मेरो हजुर २ र कृ
अवार्ड कसले जित्छ मलाई थाहा नै भएन। म सधैं नोमिनेसनमा परिरहेको हुन्छु। तर कहिल्यै जित्दिनँ। सधैं एउटैले मात्र अवार्ड जितिरहेको हुन्छ। त्यसैले मलाई अवार्डको बारेमा केही बोल्नै मन लाग्दैन।
भन्न सकिन्न : सुजिल कर्माचार्य
नोमिनेसनमा पर्ने सबै जना अवार्डको दाबेदार हुनुहुन्छ। त्यस कारण यसले जित्छ भन्न सकिँदैन। जसले जिते पनि वेल। सबैको काम नहेरेको कारण पनि भन्न सकिँदैन।
भन्न सकिएन : एलिष कार्की
मैले सबै फिल्म हेरेको छैन। म यस्तो गीत गाउँछु चाहिँ हेरेको थिएँ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मन परेको थियो। सबै फिल्म नहेरेका कारण भन्न सकिएन। लिली बिलीमा चाहिँ मैले इन्टरनेसनल म्युजिकलाई नेपाली म्युजिकमा फ्युजन गर्ने कोसिस गरेको छु।
शैलेन्द्र प्रधान र सुजिल कर्मचार्य
फिल्म : म यस्तो गीत गाउछु
अवार्ड जसले पाए पनि ठीक छ। अवार्डप्रति खासै इन्ट्रेस्ट छैन।
विधा : ध्वनि मिश्रण
जसले पाए पनि ठीक : उत्तम न्यौपाने
फिल्म : ए मेरो हजुर र कृ
अवार्ड कसले पाउँछ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ र? सबै जना आआफ्नो ठाउँमा अवार्डका लागि डिर्जभिङ हुनुहुन्छ। जसले पाए पनि ठीक छ।
कामना अवार्ड फेयर छ : मुकेश शाह
साह्रै गाह्रो प्रश्न। मैले चाहिँ अवार्ड पाउँदिनँ तर नोमिनेसनमा राखिदिनुभएछ। कामनालाई धन्यवाद। सुनयमान श्रेष्ठ दाइ त मेरो गुरु हो। उत्तम न्यौपाने बेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरु दुई÷दुई ओटा फिल्मबाट नोमिनेसनमा पर्नुभएको छ। जसले पाए पनि फेयर जजमेन्ट हुनेछ। मैले अवार्ड नजिते पनि अन्य फिल्म अवार्डभन्दा कामना फिल्म अवार्ड फेयर छ।
जसले जिते पनि रिसाउनुहुँदैन : सुनयमान श्रेष्ठ
फिल्म : संरक्षण र छक्का पञ्जा २
नोमिनेसनमा पर्नु भनेकैै अवार्ड जिते बराबर नै हो। सबै जना एक्सिपिरिएन्स भएका नै नोमिनेसनमा पर्नुभएको छ। अहिले सबै फिल्ममा इन्टरनेसनल लेभलकै काम गर्नुपर्छ। त्यस कारण सबैको काम राम्रो नै हुन्छ। अवार्ड जसले जिते पनि ठीक छ।
एउटाले जित्यो भनेर रिसाउने भन्नेचाहिँ हुँदैन।
विधा : शृंगार
मैले जित्छु कि? : अमृत मरहठ्ठा
नोमिनेसनमा परेको रहेछु खुसी लाग्यो। यसपटक नोमिनेसनमा ह्याट्रिक भएकोले अवार्ड मैले नै पाउँछु कि जस्तो लाग्छ। सबैको काम राम्रो छ तर किन किन अवार्डचाहिँ मैले जित्छु कि जस्तो लाग्यो।
आफैलाई पाउँछु भनेर चाहिँ कसुरी भन्नू : निमा लामा
अवार्ड कसले जित्छ त थाहा भएन। छक्कापञ्जा २ मा श्याम बरालको कामचाहिँ मन परेको थियो। तर सबै फिल्म हेरेको छैन। सबैलाई आफ्नो काम मन पर्छ। तर आफूले आफैलाई अवार्ड पाउँछु भनेर चाहिँ कसुरी भन्नू?
अवार्ड पाउनेलाई बधाई दिन्छौं : शंकर थापा
सबैको काम आआफ्नो ठाउँमा राम्रो छ। नोमिनेसनमा पर्ने श्याम बराल दाइ हाम्रो सिनियर हुनुहुन्छ। अरु त सबै साथीहरु एउटै ब्याचको हो। अवार्ड जसले पाए पनि एक अर्कालाई बधाई दिन्छौं।
नेपालको अवार्ड चित्त बुझ्दैन : श्याम बराल
अवार्ड कसले पाउँछ भनेर हामीले बोल्ने कुरा होइन। सबैले राम्रो काम गर्न चाहन्छन्। नेपालको अवार्डमा जुरीहरुले काममा ध्यान दिँदैनन् र नोमिनेसनमा राख्नै पर्ने भएकाले राखिदिन्छन् त्यस कारण मलाई नेपालको अवार्ड चित्त बुझ्दैन्।